WR PUBG Hack ats Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
WR PUBG likaHack yilelo elaligqokwe
Ungazihluphi nganoma ibaphi abanye abahlinzeki be-hack ongabathola ku-inthanethi. I-GamePron inezingcingo ezinhle kakhulu ze-PUBG futhi izokusiza ukuwina ukufana okuningi njengoba uthanda.
Thola ukunambitheka okuncane kokuthi kunjani ukuba ngompetha - Thenga ukhiye womkhiqizo wosuku olungu-1 namuhla!
Ungazibambi futhi uvumele abaphikisi bakho bezwe ingcindezi - Thenga ukhiye woMkhiqizo weviki elingu-1 namuhla!
Awufuni ukukhathazeka ngokulahlekelwa ukufinyelela kwakho ku-GamePron? - Thenga ukhiye womkhiqizo wenyanga engu-1 namuhla!
Thenga ukhiye womkhiqizo namuhla bese uthola ukufinyelela ngokushesha ku-PUBG WR cheat. Akukho ukulinda okuhilelekile - ungangena ungene ngqo kukho!
PUBG WR Hack Imininingwane
Yenzelwe Windows 10, I-PUBG WR ikhambi elilungile le-hack kunoma ngubani onentshisekelo kuzindawo zokulwa zomdlali ezingaziwa. Kunokukhohlisa okuningi ongakhetha kukho, kepha bambalwa abazohlangabezana namazinga atholakala lapha eGamePron. Ama-CPU asekelwe kulokhu kukopela yi-Intel ne-AMD, kanti ngenkathi ikhiyiwe i-HWID, unikezwa nokufinyelela kwi-HWID Spoofer. Isebenza kunoma yiluphi uhlobo lwe-PUBG futhi ilungele bonke abasebenzisi bethu abadlala i-PUBG - ngakho ngokuzayo lapho udlala futhi ufuna ukuphatha umncintiswano wakho njengezingane, vele unike amandla i-PUBG WR hack yethu.
Iningi lezici ozithandayo kwamanye amathuluzi ethu lisekhona lapha. Ungathola isici se-Player / Item ESP esifakiwe ngaphakathi, kanye ne-Player Info. I-PUBG Aimbot eza naleli thuluzi ayinasici, futhi uze usebenzise ne-Minimap / 2D Radar yethu.
Player ESP (Amathambo)
Ulwazi Lomdlali (Ibanga, Impilo)
I-Minimap 2D Radar
Mayelana nePUBG WR
Sithuthukise leli thuluzi elizosetshenziswa Windows 10 amasistimu, futhi izosekela ama-Intel nama-AMD CPUs. Kuza ngesiNgisi kuphela, futhi akunandaba ukuthi ubhekene nokuvinjelwa kwehardware, njengoba
leli thuluzi lifaka ne-HWID spoofer. Ubufakazi bokusakaza, ngakho-ke ungabusebenzisa ngenkathi usakaza bukhoma futhi ababukeli ngeke babe nomkhondo! Ungafaka imodi yesikrini esigcwele ngale PUBG WR ukukopela futhi, ngakho-ke akudingeki ulwe kanzima ukubona ukuthi kwenzekani esibukweni ngemodi efasiteleni. Akunzima ukuyisebenzisa nakancane, okumele ukwenze nje ukubhalisa usebenzisa i-Loader bese ulandela imiyalo.
Kungani usebenzise iPUBG WR ngaphezulu kwabanye abahlinzeki?
Ngabe abanye abahlinzeki bazobeka ikhasimende phambili, njengoba senza lapha eGamePron? Kubukeka sengathi kunezinkampani eziningi ezahlukahlukene ezizama ukuthola "izandla" zazo ku-honeypot. Ngokujabulisayo, abasebenzisi sebevele bayazi ukuthi kunendawo eyodwa (nendawo eyodwa kuphela!) Abangabhenela kuzo ukuze bakhohlise iPUBG ethembekile. Ukuchitha imali kuthuluzi kuphela ukuze likwenzele phansi (futhi kwezinye izimo, kuyakuthukuthelisa) kungagwenywa. Ukuphela kokufanele ukwenze ukusebenza ngamathuluzi atholakala lapha ku-GamePron kwasekuqaleni.
Uma udinga i-PUBG hack ethembekile engeke ikwenze uvinjelwe, usesho lwakho ekugcineni seluphelile. Ukusebenzisa imenyu yethu engaphakathi komdlalo kuzokuvumela ukuthi ucacise izilungiselelo zakho zokugenca, unikeze abasebenzisi ukulawula okuphelele kokuthi bafuna umdlalo uphume kanjani. Ungavumela zonke izici zakho futhi uzisonge kuze kufike kubuningi, noma ugenge ngokuncane "nge-finesse" bese uzama ukuheha abaphikisana nabo ngomqondo ongamanga wokuphepha. Yenza ngokwezifiso isipiliyoni sakho sokugenca futhi ujoyine ubumnandi! Yiba yilungu leGamePron namuhla futhi uzobona ukuthi kungani abasebenzisi abaningi bethi gwaqa ngama-PUBG hacks ethu.
A3. Lokhu kukopela kungaphandle ngokuxhaswa kwesikrini esigcwele, okwenza ukuthi kusheshe kusakazeke
A5. Yebo, le nkohliso isekela ukulungiswa kwesikrini esigcwele.
IGamePron ihlala igxila ekukhipheni ama-PUBG hacks asezingeni eliphakeme, ngakho-ke kungani ungajoyini iqembu? Thenga ukhiye womkhiqizo namuhla bese ubona ukuthi kungani abasebenzisi beGamePron becishe bangathinteki.
Ilungele Yengamela nge-PUBG WR Hack yethu?